डन’ मनाङ्गेले कसरी सफाई पाए ? प्रहरी अधिकारीहरु लाइ यसरी पर्‍यो चकित – ZoomNP
डन’ मनाङ्गेले कसरी सफाई पाए ? प्रहरी अधिकारीहरु लाइ यसरी पर्‍यो चकित प्रकाशित मिति: बिहिवार, मंसिर ०९, २०७३ समय - ८:५४:४७ काठमाडौं, ९ मंसिर । गत भदौ १४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गेले दुई महिनामै रहस्यमय तरिकाले सफाई पाएपछि प्रहरी अधिकारीहरु आश्चर्य चकित बनेका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको एक इजलाशले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । तर, कार्तिक १२ गते नै उनले जिल्ला अदालतबाट सबै मुद्दामा सफाई पाएका हुन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
तिहारको विदाको अघिल्लो दिन गुपचुप रुपमा सफाइ पाएका मनाङ्गे हल्ला हुने डरले केही समय भूमिगत बसेर तरुण दलको चुनावमा भने पोखरा पुगेका थिए । मनाङ्गेले सफाई पाए पनि उनका क्रियाकलापमाथि भने प्रहरीले सुक्ष्म ढंगले निगरानी गरिरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकारीले बताए ।